အလယ်ပိုင်းလေအေးပေးစက် accessories များ "အရေးပါမှု"
ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်စွမ်းအင်ကိုကြည့်ကြကုန်အံ့, လူတိုင်းအလယ်ပိုင်းလေအေးပေးစက်မရှိလူစိမ်းဖြစ်ပြီး, ဗဟိုလေအေးပေးစက် accessories များတည်ရှိမှု "optional ကို" ခံစားရ! ငါတို့ရှိသမျှသည်လေအေးပေးစက် Compressor, ပြီးတော့ပူးတွဲမှတဆင့်အရည်ထဲသို့ရေခဲသေတ္တာချုံ့ခြင်းဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဗဟိုကိုသိ ...
ကြေးနီတစ်ဦးသငြ်ကူးေူပာင်းမြဒြပ်စင်, ဓာတုသင်္ကေတ Cu, အင်္ဂလိပ်ကြေးနီဖြစ်ပါသည်, atomic number 29. သန့်စင်သောကြေးနီသည်ပျော့ပျောင်းသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ဖြတ်သောအခါ, တကသတ္တုတောက်ပနှင့်အတူအနီရောင်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်၏။ မြင့်မားသောကျဇယားအပူစီးကူးခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်စီးကူးကြိုးတွေအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုပစ္စည်းပါစေ ...
ပြွန်စနစ်, အအေးစနစ်, စနစ်, လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်, ပါဝါဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကာကွယ်မှုစနစ်က humidifying: ပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏, က6စနစ်များပါဝင်ပါသည်။ Air ကိုပြွန်စနစ်က: အစက်ခန်းထဲမှာအထူးလေအေးပေးစက်၏လေကြောင်းပြွန်စနစ်ကများသောအားဖြင့်မော်တာ, fa ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ် ...
အအေးများ၏အလုပ်လုပ်နိယာမရေနွေးငွေ့၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ဖိအားတိုးမြှင့်ဖို့အဖြစ်ဒါကြောင့်ကွန်ပရက်ဆာ, မြင့်မားသောဖိအားနှင့်အတူရေနွေးငွေ့သို့နိမ့်ဖိအားနှင့်အတူရေနွေးငွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖိအားပြီးနောက်, အလတ်စားအနိမ့်ဖိအားရေနွေးငွေ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်ရေငွေ့ပျံခြင်းမှကွန်ပစုတ်ယူခြင်း ...
သငျသညျ Google Analytics ကဘာလဲဆိုတာမသိလျှင်, သင့်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ install လုပ်ထားကြပြီမဟုတ်, သို့မဟုတ်ပါက install လုပ်ထားကြပါပြီဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုကြည့်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤ post ကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဒါကြောင့်အများအပြားယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းနေစဉ်, အဘို့, Google Analytics သည် (သို့မဟုတ်မည်သည့် analytics အသုံးမပြုဖြစ်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနေဆဲရှိပါတယ် ...
အမှတ် 18, Zhao နှင့် Xian လမ်းမကြီး Songhu lndustrial ဇုန်, Yuecheng မြို့, Yueqing စီးတီး, Wenzhou စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်